मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको नाफा ५६ प्रतिशतले बढ्दा प्रति सेयर आम्दानी कति ? – Clickmandu
मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको नाफा ५६ प्रतिशतले बढ्दा प्रति सेयर आम्दानी कति ?
क्लिकमान्डु २०७६ कार्तिक २१ गते ११:२२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ४ करोड २७ लाख २९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।
जुन गत आवको सोहि अवधिको तुलनामा ५५.९२ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको सोहि अवधिमा २ करोड ७४ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
लघुवित्तको नाफा बढनको लागि खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफाको योगदान राम्रै देखिएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा ७ करोड ९ लाख १७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आर्जन गरेको संस्थाले चालु आवको सोहि अवधिमा आईपुग्दा ११ करोड ९७ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै सञ्चालन मुनाफा पनि ४ करोड २५ लाख १६ हजार रहेको सञ्चालन मुनाफा ५ अर्ब ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
६५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको संस्थाको जगेडा कोषमा ४२ करोड ६५ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । १ अर्ब ३१ करोड २२ लाख २९ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको संस्थाले ४ अर्ब ८८ करोड २० लाख ७४ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
संस्थाको खराब कर्जा भनेर अहिले बढेर १.६० प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा यो १.४८ प्रतिशत रहेको थियो । प्रति सेयर आम्दानी २५ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको संस्थाको प्रति सेयर नेटवर्थ १६४ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ ।
६४ अर्ब सम्पत्ति घटेपछि सेयर कारोबारको अनुसन्धान हुने, दोषी देखिएमा कारोबार रद्द